Ngokuya ngemibiko yabathengi, njengamanje i-smartphone ehamba phambili emakethe yi-Galaxy S8 | Izindaba zamagajethi
Namuhla akekho omangele ukuthi yi-Samsung ne-Apple kuphela okuyizinkampani kuphela ezihlala endaweni ephezulu yocingo lweselula. Abaningi bazamile njenge-LG, Sony ezikhathini zamuva iGoogle ngeGoogle Pixel, ukuphela okungakaze kubonwe ngaphandle kwe-United States futhi okwamanje kubonakala sengathi izinto ngeke zishintshe. Imibiko yabathengi yinhlangano engenzi nzuzo evikela izintshisekelo zezakhamizi ngaphezu kokudala izincomo ezahlukahlukene zabasebenzisi Bangaphepha lapho bethenga izinto, kungaba ezikagesi noma ezinye izinhlobo.
Ngokombiko wayo wakamuva, njengamanje i-smartphone enhle kunazo zonke esingayithola emakethe yi-Galaxy S8 nomfowabo omdala i-S8 +, imi ngenhla kwe-Apple ne-iPhone 7 Plus yayo enamakhamera amabili. Phakathi kwamaphuzu amahle ahlinzekwa ngumbiko weMibiko Yabathengi yakamuva sithola ukwakheka okumangazayo ngaphambili lapho cishe yonke into iyisikrini, kufaka phakathi izinhlangothi nempilo yebhethri phakathi kwamaphoyinti aphawuleka kakhulu.
Okubonakala sengathi le nhlangano engenzi nzuzo ayithandanga nhlobo isimo senzwa yezigxivizo zeminwe, abantu abaningi abayithandanga, ngoba iyibeka eduze kwekhamera esikhundleni sayo ngaphansi kwayo gwema ukugcoba amalensi ekhamera ngaso sonke isikhathi lapho sivula ukuphela. Umsizi wesigamu, uBixby naye usezici ezingezinhle zalesi siginali.
Kuyacaca ukuthi La maphuzu amabili amabi atholwe yiSamsung nge-S8 abengagwemeka kalulaNjengoba uma i-Bixby ingatholakali, into enhle bekungaba ukulinda izinyanga ezimbalwa bese uyethula ngeNothi 8 noma esizukulwaneni esilandelayo. Inzwa yezigxivizo zeminwe, asazi ukuthi yini ezobe iwele izingqondo zabaqambi, kepha ngenhlanhla lesi sici asisona isizathu esanele sokungathengi i-terminal.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule sikwazise nge i-smartphone yokuqala engangena emakethe ngenzwa ehlanganisiwe yeminwe ngaphansi kwesikrini. Lesi siginali esenziwe iVivo, sizoba (uma sizokwethulwa maduzane) isiginali sokuqala ngalobu buchwepheshe, ngoba bobabili abakwaSamsung nabe-Apple bahlele, ngokusho kwawo wonke amahemuhemu, ukuyisebenzisa ku-Note 8 naku-iPhone 8, ukuqaliswa lokho ebengingakwenza ngaphambilini kepha kubonakala sengathi hhayi kuphela ube nezinkinga zokusebenza, kepha nezinkinga zokusebenzangoba isivinini sokuvula sihamba kancane uma kuqhathaniswa nezinzwa zamanje.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ngokuya ngemibiko yabathengi, i-smartphone ehamba phambili emakethe njengamanje yi-Galaxy S8